मस्तिष्क व्यायाम - र डगको बारेमा थोरै Martech Zone
मस्तिष्क व्यायाम - र डगको बारेमा थोरै
मंगलवार, सेप्टेम्बर 12, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
वेबमा मलाई धेरै मनपर्ने चीजहरू मध्ये एक यो कला र प्रोग्रामिंग बीच रेखा लाई पार गर्दछ। मेरो हाई स्कूल बर्षमा, म एक उत्सुक कलाकार थियो ... सँधै कतै कतै केत मेरो वरिष्ठ वर्षमा, मैले औद्योगिक ड्राफ्टिंगमा कलेजको केही पाठ्यक्रम लिएँ। ड्राफ्टिंगले मेरो पेन्सिलबाट अलिकति स्वतन्त्रता लियो, तर म ड्राफ्टिंगको सहीसँग रमाईलो भएँ। मैले कक्षा aced तर कहिल्यै कलेज मा लिएनन्।
यसको सट्टामा म नेभीमा सामेल भएँ र इलेक्ट्रीशियन बनें। व्यक्तिहरूका धेरै आश्चर्यचकित छन् कि मेरो विगतले मलाई मार्केटिंग, डाटाबेस मार्केटिंग, वेब डिजाइन, र वेब अनुप्रयोग डिजाइनमा डोर्यायो ... तर यो एक प्राकृतिक विकास थियो। औद्योगिक इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक मेसिनरीसँग काम गर्न आवश्यक तर्क र अनुशासनले मलाई केही उत्कृष्ट तर्क र समस्या निवारणको अनुभव दियो। यसले अन्ततः मलाई इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजीको लागि कलेज जानको लागि प्रेरित गर्‍यो। यस समयमा मैले समस्या निवारण र डिजाईन गर्ने भर्या। प्रोग्रामिंग पीएलसी (प्रोग्रामेबल लजिक कन्ट्रोलरहरू) मा शुरू गरें। यसले पीसी एकीकरण, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एकीकरण, र डाटाबेस एकीकरणमा नेतृत्व गर्‍यो।
म दुबै टेक्नोलोजी र ममा भएको उद्योगको साथ प्रेम गरें ... अखबार उद्योग। म व्यापारको उत्पादन पक्षबाट व्यापारको बजार र विज्ञापन पक्षमा जान चाहान्छु ... तर कसैले तपाईंलाई निलो रंगको पोशाकमा देख्यो भने, मार्केटिंग कार्य पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसोभए ... मैले घोडाहरू र गाडीहरू भरिदिएँ र मेरा बच्चाहरू वेस्टमा सारिदिए, डाटाबेस मार्केटिंग फर्मका लागि काम गर्दै जुन अखबार उद्योगमा मार्केटिंग डाटा गोदामहरू डिजाइन, निर्माण र लागू गर्‍यो। यो आकर्षक काम थियो। मैले केहि ठूला अखबारहरूसँग काम गरें र व्यक्तिगत रूपमा उद्योगमा केही महान अनुप्रयोगहरू विकास गरें।
म एक दशक भन्दा बढी यो उद्योग संग अटेर र मेरो लागि धेरै राम्रो गर्नुभयो। म 20० बर्ष मुनिका शीर्ष २० मध्ये एक जनाको रूपमा पनि उद्योगमा मनोनीत थिएँ। मैले धेरै उद्योग पत्रिकाहरूका लागि लेखें र मेरो अनुभवलाई काममा लगाए, स्थानीय अखबारका लागि उल्लेखनीय डाटाबेस मार्केटि initiative पहल निर्माण गर्दै। त्यहाँ व्यवस्थापनमा परिवर्तनले डाटाबेस मार्केटिंगमा कम जोड दिए। मेरो दशकमा अखबारहरू ठूलो निगमहरूले निल्दै थिए, त्यसैले उद्यमी प्रतिभा तपाईको कागजमा प्रयोग गर्न सक्ने कुरा थिएन। मैले अन्ततः अखबार र उद्योग छोड्ने निर्णय गरें। त्यो गाह्रो चाल थियो। भाग्यवश मैले बाहिर जाने बाटोमा थोरै धक्का पाए। 🙂
मेरो अर्को वर्ष अन्य कम्पनीहरूले उनीहरूको कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न मद्दतमा खर्च गरे र म अन्ततः एक ठूलो टमटमको साथ अवतरण गर्दै थिए ExactTarget। यो एक शानदार कम्पनी हो, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने निजी कम्पनी हो। उनीहरूसँग एक उत्कृष्ट उत्पाद छ र म यसलाई अझ राम्रो बनाउन जारी राख्नको लागि अहिले चुनौती दिएको छु।
यद्यपि यो कहिलेकाँही पर्याप्त हुँदैन। म अझै पनि इंडियानापोलिस कोल्ट, इण्डियानापोलिस चेम्बर अफ कमर्सलाई सहयोग पुर्‍याउने, साथीहरू र सहकर्मीहरूको लागि एक धेरै साइटहरू होस्ट गर्ने र डिजाइन गर्ने, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यक्रमहरूमा भाग लिने, र नयाँ चुनौतिहरूको सामना गर्ने बारेमा उत्साहित छु। मैले सुरुवात गर्न मद्दत गरें म इन्डी छान्नुहोस्!, घाँस-जरा साइट जहाँ मान्छेले किन उनीहरूले इन्डियानापोलिस छनौट गर्न सक्दछन्। यो एक गति हो जुन एक साइट हो। मँ मेरो ब्ल्गिंग, टेक्नोलोजी, र मार्केटि experience अनुभवलाई काममा राख्नको लागि अर्को पार्टनरसँग मेरो आफ्नै व्यवसाय, कम्पेन्डियम सफ्टवेयर, सुरूवातमा पनि काम गर्दैछु। मलाई द्रुत र उग्र गतिमा काम गर्न मन पर्छ र म 'गर्न सक्ने' मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूसँग काम गर्न मन पराउँछु।
म मेरो 'बायाँ मस्तिष्क' को व्यायाम र फोटोशप र इलस्ट्रेटरको प्रयोग गरेर दृष्टान्तहरू निर्माण गर्न रमाईलो गर्छु। यसले रचनात्मकताको एक बिट लिन्छ। आज राती, मैले एक स्थानीय बैण्ड रोक हलिउडको लागि लोगोमा काम गरें। मैले यो तिनीहरूलाई एक घण्टा पहिले पठाएको थियो। म शायद उनीहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा केहि पटक यो फेरि गर्नेछु ... तर तपाईले देख्नु भएको अनुसार म रमाईलो गर्दैछु।
तलको रेखा यो हो कि म 38 XNUMX हुँ र म ठूलो हुन जब म के हुन चाहन्छु थाहा छैन! मलाई थाहा छ कि म धेरै गाह्रो समस्याहरूको टेक्निकल समाधान खोज्न, र यसमा मानिसहरूलाई शिक्षित गर्नमा निकै राम्रो छु। टेक्नोलोजीको लागि मसँग भेरुक भोक छ। मलाई बहाना बनाउने मानिसहरूलाई धैर्यता छैन, तर मलाई मद्दतको लागि सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई मद्दत मन पर्छ। त्यहाँ ग्राहकको अनुहारको मुस्कान भन्दा बढी सन्तुष्ट हुने केही छैन।
म सबै ट्रेडहरूका एक राजा हुँ (म ज्याकबाट विकसित भएको छु) तर म अझै पनि कुनैको पनि मालिक छैन। म राजनीतिमा खडा हुन सक्दिन विशेष गरी अफिसमा। म त्यस्तो चीजहरूमा काम गर्न मन पराउँदिन, जुन परिमाण योग्य लक्ष्यहरू हुँदैन। म बैठकहरूलाई घृणा गर्दछु जहाँ हामी लक्ष्यको साथ भेट्दैनौं (म ढिलो देखाउँछु र मेरो PDA लाई ल्याउँछ ताकि म ईमेल गर्न सक्दछु)। मलाई ढिलो काम गर्न मन पर्छ ... मेरो सबैभन्दा उत्पादक समय सामान्यतया १०PM र आधी रातको बीचमा हुन्छ। र मलाई बिहान २० पटक स्नूज हिट गर्न मन पर्छ।
यी सबै र म एकल बुबा हुनुहुन्छ! मेरा बच्चाहरूसँग समय उत्तम छ। हामी अझै पनि चलचित्रहरू देख्छौं जब हामी सक्दछौं र हामी सँगै धेरै ह्या hang्गआउट गर्दछौं। मेरा दुबै बच्चाहरू अविश्वसनीय छन्। ओह, म मेरो पहिलो 'कफी मिति' को लागी अगाडि हेर्दै छु यस हप्ताको अन्तमा ... जुन मेरो मस्तिष्कको एक अंश हो जुन मैले धेरै बेर प्रयोग गरेको छैन त्यसैले मलाई भाग्य दिनुहोस्!
मेरो बारेमा पर्याप्त! निद्राको लागी समय।
तपाईं माइस्पेस द्वारा धोखा गरिएको छ
प्रेरणा: टम पीटर्स
सेप्टेम्बर १,, २०११ 13::2006० अपराह्न
मेरो धेरैजसो केटाहरूको बाल्यकालको लागि म एक्लो बुबा हुँ। त्यो सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा एकदम नराम्रो पक्ष हो - मेरा केटाहरूलाई लामो अवधिको लागि नदेखी। अब तिनीहरू सबै ठूलो भइसकेका छन्, र म तिनीहरूलाई अझै कम देख्दछु। समयको कदर गर्नुहोस्।
मसँग उनीहरूसँग वास्तवमा धेरै समय छ, स्टर्लिंग। म बच्चाहरु को हिरासत छ। मैले मध्यपश्चिमा छनौट गर्नुको एउटा कारण यो हो कि उनीहरूले आफ्नी आमालाई देख्न सक्दछन्, जो पुनर्विवाह गर्दैछन् र लुइसभिलमा बस्दै छन्। म पक्का छैन कि मैले उनीहरूलाई बिना के गरेको थिएँ!
म पुनः सहमत छु: सम्बन्धविच्छेद। यो संलग्न सबैको लागि भयानक छ।